Xog: Maxaa guriyey webiga Shabeelle? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Todobaadyadii lasoo dhaafay waxaa meesha ka baxay biyihii webiga Shabeelle, isagoo intiisa badan isu bedelay meel qallalan, waxaana soo baxayey warar sheegaya in biyo la’aanta webiga ay sabab u tahay, iyadoo Itoobiya leexsatay biyo badan si ay ugu waraabsato masgaariic aad u baaxad weyn.
Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa si rasmi ah u shaacisay in wabiga Shabeelle dowladda Itoobiya ka hirgelisay mashruuc weyn, kaasoo lagu leexiyey biyo farabadan oo lagu waraabinayo mashaariic beero oo la doonayo iney ka faa’iideystaan Soomaalida ku nool gobolka Killinka Shanaad.
Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, Cabdi Maxamuud Cumar oo mashruucaan daaha ka rogay ayaa ku dhiirigeliyey dadka degan degmooyinka Godey iyo Beercaano iney beeraha fashaan, ayna soo saaraan dalag waxtar leh oo dadka ku nool debadda Itoobiya oo soo doonan karaan.
Mashruucaan oo loogu magaca daray “Mashruuca Waraabka Galbeedka Godey” waxaa maalgeliyey dowladda Itoobiya, waxaana fuliyey Shirkadda Howlaha Dhismaha Biyaha Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Shirkadda METEC ee iyadana Itoobiya laga leeyahay.
Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in mashruucaan ay ku baxday lacag dhan 212 Milyan oo birta Itoobiya ah. Wuxuu sheegay in mashruucaan dib u dhac badan ku dhacay sababtuna aheyd in biyo leexintu u baahneyd aqoon iyo dhaqaale.
“Mashruucan horay ayuu u baaba’ay, howsha ayaana cusleyd, biyaha in la leexiyo waxey u baahneyd cilmi iyo miisaaniyad” ayuu yiri Cabdi Maxamuud Cumar.
Wuxuu madaxweynaha Deegaanka Soomaalida Itoobiya dadka deegaanka ugu baaqay iney beertaan bariiska, sisinta iyo waxa la mid ah, balse aysan beerin ganleyda oo kaliya oo balkeeda la iibiyo.
Mashruuca Waraabka Galbeedka Godey wuxuu ka kooban yahay 4 Kanaal waaweyn oo laga leexiyey Webiga Shabeelle, waxaana loogu talagalay iney ka faa’iideystaan 27 kun oo qoys, sida uu sheegay ESTV oo ah Telefeshinka ku hadla Afka Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Magacayada Kanaalada waaweyn ee Itoobiya biyaha ku leexsatay ayaa ESTV ku kala sheegay:
1- Haar-basiir, oo waraabin kara 1920 Hektar oo dhul beereed ah.
2- Dib-u-dejinta, oo waraabin kara 980 Hektar oo dhul beereed ah.
3- Cilmi-baarista, oo waraabin kara 630 Hektar oo dhul beereed ah.
4- Iskaashatada, oo waraabin kara 320 Hektar oo dhul beereed ah.
Mashruucaan ayaa halkii Ilbiriqsi soo tuuri kara 46 Kun litar oo biyo ah, waxaana howshiisu socotay muddo 2 sano ah.
Biya Xireenadan oo 2 bilood ee lasoo dhaafay ku jiray tijaabo ayaa sida muuqata sababay biyo la’aanta ka dhacay Webiga Shabeelle, gaar ahaan qeybaha uu ka maro dhulka Soomaaliya.